Yintoni i-Photon eFizikiki?
Iiphoton Ziyi "Bundle Yamandla"
I- photon yincinci yokukhanya echazwe njengesixhobo esicacileyo (okanye i- quantum ) yamandla kagesi (okanye ukukhanya). Iiphoton zihlala zihamba kwaye, kwindawo yokucima (isikhala esingenalutho ngokupheleleyo), sibe nejubane lokukhanya kubo bonke ababukeli. Iiphoton zihamba ngejubane lokukhanya (ngokuqhelekileyo nje kuthiwa yijubane lokukhanya) c = 2.998 x 10 8 m / s.
Iipropati eziPhambili zePhoton
Ngokwe-photon theory of light, photons:
ziziphatha njengengqungquthela kunye nomswakane, kunyekanye
ukuhamba ngesantya rhoqo, c = 2.9979 x 10 8 m / s (oko kukuthi "ijubane lokukhanya"), kwisithuba esingenanto
unobungakanani obuninzi kunye namandla okuphumla
zithwala amandla kunye nokukhawuleza, eziye zihambelana nokuphindaphinda ( nu) kunye ne-wavevel (lamdba) yomshumbane wamagesi , njengoko kuboniswe ngu-equation E = h nu ne- p = h / lambda .
inokutshabalaliswa / idalwe xa i-radiation ichithwe / ikhutshwe.
Unokubambisana okunjengobunqamlezo (oko kukuthi i-collisions) ngee-elektrononi kunye nezinye iindidi, ezinjenge- Compton esebenzayo apho iincinane zokukhanya zihlanganiswa nee-athomu, ezibangela ukukhululwa kwama-electron.
I-term photon yenziwe nguGilbert Lewis ngowe-1926, nangona iqondo lokukhanya ngendlela yee-particle edibeneyo sele ijikeleze ikhulu leminyaka kwaye yenziwe ngokusemthethweni kwakhiwo kaNewton yesayensi ye-optics.
Ngona-1800, ke, iimpawu zokukhanya ezikhanyayo (okubhekiselele kumbane we-electromagnetic in general) zaba zibala ngokugqithisileyo kwaye izazinzulu ziye zaphosa i-particle theory ye-light out window.
Kwakungekho u- Albert Einstein wachaza umphumo weefoto kunye nokufumanisa ukuba amandla okukhanya kufuneka aqikelelwe ukuba i-particle theory ibuyele.
I-Wave-Particle Deality ngokufutshane
Njengoko kukhankanywe ngasentla, ukukhanya kunempahla yombane kunye nomxube. Oku kwakukufumanisa okumangalisayo kwaye ngokuqinisekileyo kungaphandle kwendawo yokujonga ngayo izinto.
Iibhilidi zebhilididi zenza njengengqungquthela, ngelixa iilwandle zisebenza njengamaza. Iiphoton zenza zombini umtsalane kunye neengqungquthela yonke ixesha (nangona liqhelekileyo kodwa ngokungafanelekanga, ukusho ukuthi "ngamanye amaxesha umtshangatshi kunye namaxesha athile inxalenye" ​​kuxhomekeke kwiziphi iinkalo ezicacileyo ngexesha elithile).
Ngomnye wemiphumo yolu hlobo lwe-particle-wavele (okanye i- particle-wave-duality ) yinto yokuba i-photons, nakuba iphathwe njengeengqungquthela, ingabalwa ukuba ininzi, i-wavevel, i-amplitude, kunye nezinye iipropati ezibonakalayo kwi-mechanics.
Ziyolise iiPoton Facts
I-photon iyinxalenye yeplastiki , nangona ingaba inzima. Ayikwazi ukubola ngokwayo, nangona amandla e-photon angadlulisela (okanye adalwe) ekusebenzisaneni nezinye iindidi. Iiphoton zithethi zombane kwaye zingenye yeengqungquthela ezingaqhelekanga ezifana ne-anti-particle, i-antiphoton.
Iiphoton zi-spin-1 particles (ezenza i-boson), nge-axin e-spin ehambelana nokuhamba kwendlela (mhlawumbi phambili okanye ngasemva, kuxhomekeka ukuba ingaba "ngakwesobunxele" okanye "isandla sokunene" photon). Le nto yinto evumela ukuba kube lula ukukhanya.
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: i-cephal-, cephalo-
Yintoni i-Front Front?
Yintoni eyahlukileyo phakathi kobutyebi kunye neMolality?
Ukukhawuleza kokuKhanya: NguLona oluPhezulu lweSouth Cosmic Limit!
I-Fiber Fiber Yenziwe Njani?
Imizekelo yeeMveliso zeChimicals
Ziziphi Iingcebiso Zemfundo Yomtshato Ongatshatanga?
Umlambo waseTiber waseRoma
Fumana iNani elikhulu kunazo zonke okanye elihle kwi-Excel
Imisebenzi yi-First Pritzka yaseLinter Laureate Wang Shu
Indlela Yokulungisa Uxinzelelo Lweoli Ophantsi
IYunivesithi yaseMaine kwi-Fort Kent Admissions
Yintoni enokuyenza Ukuba Unomfundisi weKholeji embi
Imfazwe Yomthonyama yaseMelika: iMfazwe yaseOlustee
UMTHETHO Ulinganisa ukungeniswa kwiikholeji zobunjineli zoBugcisa
Jupiter kwiGemini - Mercurial Mixologist
Biography yaseStanford White
Isingeniso kwiBrash Art Paint Brushes
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseCraater
Imiba ephezulu yeZingqongileyo zonyaka, 2000-2009
Indlela yokufunda kwi-Space Space
Iimpi zeNapoleonic: iMfazwe yaseTrafalgar